कसरी लाग्छ डेंगु ? प्रदेश तीनका ४ हजार जनामा डेंगु,मकवानपुरमा ७ सय २८ जनामा डेंगु - Khabar Break | Khabar Break
कसरी लाग्छ डेंगु ? प्रदेश तीनका ४ हजार जनामा डेंगु,मकवानपुरमा ७ सय २८ जनामा डेंगु
हेटौंडा २६ भदौ,एडिज इजीप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोगका विरामी देशभर बढिरहेका छन् ।
प्रदेश तीनको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश तीनमा हालसम्म ३ हजार ७ सय ६६ जनामा डेंगु देखा परेको जनाएको छ । हाल सम्म प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा चार हजार जनाको हाराहारीमा डेंगुका बिरामी फेला परेको जनाएको छ ।
१३ जिल्ला मध्यमा सबै भन्दा बढि चितवनमा एक हजार ४ सय ६० जना बिरामी फेला परेका छन् भने मकवानपुरमा ७ सय २८ जनामा फेला परेको जनाईएको छ । यस्तै काठमाण्डौमा १ हजार ३ सय ४५ जनामा डेंगु देखा परेको प्रदेश तीनको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य जिल्लामा भने यी जिल्लाको तुलनामा थोरै मात्र बिरामी फेला परेका छन् । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र रसुवा जिल्लामा डेँगुका विरामी नरहेको मन्त्रालयले जनाएका छ ।